IGAD Oo Rajo Ka Qabta In Gaas Soo Celiyo Xiriirka Dowladda Federaalka Iyo Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Urur Goboleedka IGAD ee Soomaaliya ka mid tahay ayaa rajo ka qaba inuu dib u soo laabto xiriirkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul Goboleedka Puntland, kadib markii shalay madaxweynaha maamulka Puntland loo doortay R/wasaarihii hore ee Soomaaliya C/weli Maxamed Cali Gaas.
Danjire Maxamed Cabd Afey oo ah ergeyga gaarka ah ee Urur Goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in IGAD ku rajo weyntahay in Madaxweynaha cusub ee Puntland C/wali Gaas uu soo celin doono xiriirkii dowladda Federaalka iyo Puntland, kaasoo uu horay u jaray madaxweynihii laga guuleystay C/raxmaan Faroole.
“Waxaa farxad gooni ah in Cabdiweli Gaas oo qirbrad u leeyahay Soomaaliya, siyaasada qeyb weyn ka qaatay, waa ku amaanan yahay in Soomaaliya KMG ah ka baxdo, waxaan ku kalsoonahay inuu soo celiyo xiriirkii dowladda Federaalka iyo Puntland, anagana waa la garab taaganahay wixii taageero ah” ayuu yiri Maxamed Cabdi Afey.
Maxamed Cabdi Afey oo IGAD goob joog uga ahaa doorashada madaxweynaha Puntland ayaa u mahad celineyey odayaasha dhaqanka oo saldhig u ahaa in Baarlamaanka soo dhisaan, wuxuuna xusay in natiijadii soo baxday noqotay wax xalaal ah.
Danjire Afey ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada hagaagsamaya yo kuwa aan hagaagin wali inay ku daydaan Puntland, wuxuuna dhanka kale dowladda federaalka ah ugu baaqay inay horseed u noqoto sidii loo abuuri lahaa maamulada kale ee dhismaya, loona xoojin lahaa kuwa dhisan.
Danjire Maxamed Cabdi Afey oo kazoo jeeda gobolka Woqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu degto ayaa bishii December ee dhamaadkii sanadkii tegay ee 2013 IGAD u magacawday inuu noqdo Ergayga u qaabilsan Soomaaliya, wuxuuna goobjooga ka noqday dooshadii madaxtinimo ee shalay ka dhacday Garowe.